#တဆင့်ချင်းတက်ကြပါစို့ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ဒ လို လေး.. နား လည် ထား ရင် ဟို ဟာ က ကောင်း တယ် ဒီ ဟာ က ကောင်း တယ် ဟို ဟာ က အကောင်းဆုံး ဒီဟာက အကောင်းဆုံး ဆိုတာ တွေဟာ မိမိရဲ့ လိုက်မှီတဲ့ ဉာဏ် နဲ့ လိုက်မှီ တာကို ရှုရတာကို ပြောတာပါ.ဆိုကြပါစို့..တရားတော်တွေကို( ၃) ပိုင်း ပိုင်းပြီး ကြည့်လိုက်ပါ..#ကောင်း တယ် ၊ #ပို၍#ကောင်းတယ် ၊#အကောင်းဆုံး…ဆို ပြီး…ဒ လို ပိုင်း လိုက် ရင်…ဘယ် တရား အား ထုတ်တာ ကတော့ အကောင်းဆုံး…. ပဲ… ဟေ့… လို့..ဟောကြား ထားတဲ့ တရား တွေကို နာကြား ဖူးထား တော့ကာ…ကောင်းတယ်… ဆိုတဲ့ အဆင့်မှာ ရှိတဲ့ တရားတွေ ကိုကျတော့…ဟာ.. ဒါကြီး က ကောင်းမှမကောင်းတာ… ဆိုပြီး.. အဲ့လို.. #အစွန်းရောက်သွားတက်တယ်…အဲ့တော့. ကောင်း မကောင်း ဆိုတာ မိမိရဲ့ ဉာဏ်အား ပေါ်မူ တည်တယ် လို့ဆို ရတာပါ…ဒါကိုပင် ဖဘုရားရှင် ကိုယ် တော်မြတ် ကြီးက..#စိတ္တေဏနီယ တိလောကော.. .#လူတွေဟာ ကိုယ့်စိတ် ဖြစ်ချင်တဲ့ အတိုင်း ဖြစ်နေကြရတာပါ..တဲ့#ဘဝကကြိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး..တဲ့#မိမိတွေးသမျှအနာဂါတ်မှာမိမိပိုင်ဆို င်နေရ တာပါ…လို့ ဒလို ဟောခဲ့ တာမ ဟုတ် ပါလား…ဒါမို့ မိမိရဲ့ ဉာဏ်မှီ သလောက် ရကြ တာပေါ့..ဟောတဲ့တရားတွေကို မိမိက ကောင်းတယ်… ဆိုတဲ့ အဆင့်လောက်ကိုသာ ကျင့်နိုင်ရင် … အဲ့အဆင့်ကနေစကျင့်ပေါ့…သို့မဟုတ်..ပို၍ကောင်းတယ်…အဆင့်မျိုးကို မိမိဉာဏ်က လိုက်မှီ ရင် အဲ့ အဆင့်ကို ကျင့်ပေါ့/..ထို့ထက် အကောင်း ဆုံး ဆိုတဲ့ တရား ကိုဖြင့် မိမိ ဉာဏ် က လိုက်မှီ တယ်ဆိုရင်ဖြင့်…အဲ့ဒီအကျင့်ကို ကျင့်ပေါ့ကွယ်…ဒီတော့ ဟိုတရားက ဟိုလိုဟောတယ် ဟိုဆရာ က ဒီလိုဟောတယ် ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးလဲ မသိတော့ဘူး…ဆိုရင်တော့..။
#အတိုဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးလေးကတော့…#မိမိစိတ်အားသန်ရာကိုစိတ်ပါလက်ပါမိမိဉာဏ်မှီရာကိုအရင်ဆုံး ထုံနေအော င်ရှုပွား ပါလို့…အဲ့ဒလို စ #ရှုဖြစ် သွားပြီ ဆိုရင် ကြာကြာ လေ့ကျင့် လာတော့ ထုံလာ မယ်ထုံလာရင် ဉာဏ်ရင့် လာမယ်….ဉာဏ်ရင့် လာ တော့ မှ အပေါ် က ပြောခဲ့ သလို… အ ကောင်းဆုံး ဆို တဲ့ အ ဆင့် ကို ရောက် ရှိ သွား ပါ လိမ့် မယ်…ဒါမို့ လူတွေ ဟာ တ ယောက် နဲ့ တ ယောက် အသိ ဉာဏ် level ခြင်း မတူ ကြ လို့သာ… ဘဝ တွေ မတူ ကြ တာပါ…ဒါကိုပဲ မြတ် စွာ ဘုရား ရှင်ကြီးက ဉာဏ်အနု အရင့် ပါရမီ ဓာတ်ခံ တွေကို ကြည့် ပြီး သတ္တဝါ တွေကို တရား ပေး တရား ဟော ခဲ့ရ တာပေါ့…ပုံစံတူ သာဆိုရင် အကုန် လုံးကို တူတူ ပဲ ဟောခဲ့ မှာပေါ့…ဒီတော့ မိမိ ဘက်က လုပ်စရာ တခုပဲ ရှိပါ တယ်..အဲ့ဒါက…ငါ… က ဘယ်ဉာဏ် အဆင့်လဲ ဘာ attitude လဲ ဆိုတာ လေးကို သိသွား ရင်…လမ်းစ ရသွားပြီမို့…မိမိက စတင်ပြီး အားထုတ်လိုက်တဲ့ တရား အ ဆင့်ကနေ တဖြေးဖြေး မြင့်တက်သွားပါလိမ့်မယ်.. ဒီနေရာလေးမှာ တရား ရဲ့ မူရင်း definition လေးကိုတော့ သိထားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့..တရားဆိုတာ #သဘောသဘာဝပါ..သဘော ဆိုတာ ဘာလဲ လို့မေးရင်…ဆိုကြပါစို့..ငရုပ်သီးရဲ့ အရသာ က ဘာသ ဘောရှိလဲ?စပ်တယ် နော်…အင်း… အဲ့ဒီ စပ်တာကို ကိုင်ပြ လို့ရလား?မြင်လို့ ရလား?အသံရောကြားရလား? စပ်တယ် ဆိုတာကို အဲ့ လို ပြောပြ မြင်ရ ကိုင်ပြ လို့မရတဲ့…စပ်တဲ့…. သဘော… လေးသက်သက်ပဲ ရှိနေတာနော်…။
အဲ့ဒါ ဟာ ငရုပ်သီးရဲ့ သဘာဝ အမှန်ပဲလေ..အဲ့ သလို ကိုင်တွယ် ပြလို့မရ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ မဟုတ် တာကြီးကို မိမိဉာဏ်ကနေ ခိုင်ခိုင်မာမာ သိရှိသွားတာကို သဘောသိသွားတာပါ ဘာသ ဘောလဲ ဆိုရင်​ဖြင့် သူ့ရဲ့ သဘာဝ ရဲ့ သဘော ကို သိသွားတာပါ…အဲ့သဘာဝ ငရုပ်သီး စပ်တာကို ဘယ်သူ က ဖန်ဆင်းထားလဲ ဘယ်သူက လုပ်တာလဲ ဆိုပြီး ဉာဏ်က အဖြေထုတ်ကြည့်တော့ အကြောင်း အကျိုး ကိုသာ တွေ့တ ယ်…..ငါ…. ဆိုတာ မတွေ့…. ငါစပ် နေတာ မဟုတ်..စပ် တက်တဲ့ သဘာဝ ကြောင့် စပ်တဲ့ သဘော လေးသာ ရှိနေတာပါ လား… ဆိုပြီး..သဘောသဘာဝ ကို လက်ခံသွားတဲ့ ပုံစံ လိုမျိုးပါပဲ…တရားဆိုတာ အကြောင်း အကျိုးပဲ ရှိနေ တာ ပါလား..လို့ လက်ခံ တဲ့ ဉာဏ် ဖြစ် သွားတာ..ပါ..#ဉာဏ် ကလည်း ကိလေသာ တွေ ဖုံးလွှမ်း နေရင် တော့ ဉာဏ် မလာ ပါဘူး…ဒါ မို့ ကိလေသာကို လည်း..#အကြမ်းစား#မလတ်စား#အနုစား သတ် နည်းတွေ နဲ့ သတ်ရပါတယ်.. ဒီ နေရာ မှာ လည်း….ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ပွားနေ တာတို့ မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ပွားနေ တာတို့ စတာ တွေဟာ.. #ကိလေသာ ကို အကြမ်းစား နည်းနဲ့ သတ်နေ တာပါ…အဲ့ဒီ အဆင့် ကိုလည်း ထုံ နေအောင် အား ထုတ်ထား မယ်ဆိုရင် လောကီ စီးပွားရေးတွေ လူမှုရေး စားဝတ်နေရေး တွေပြည့်စုံ ကြွယ်ဝလာ ပါတယ်..ဒါမို့ တချို့ #မြေဇင်း တရားအားထုတ်ပြီး သွားတဲ့ နောက်ပိုင်း တအားကိုမှ စား ဝတ်နေ ရေးတွေ ပြေလည် သွား ကြတယ် လို့…. ဒလိုတွေ ပြန် လည် ကြား ရတာ….ဘယ်မှာ ထူးဆန်း ပါ မည်နည်း..။
အဲ့ဒီ #ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်မှာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ တွေထုံနေ အောင်ပွားများ ထားသည်ကိုး…ဒါမို့ အကြမ်း စား ကိလေသာ သတ်နည်းတောင် ဒလို အကျိုးတွေ ပေးတါ…ကျန်တာကတော့ ပြောဖွယ်ရာ ဘယ်ရှိ တော့ မလဲနော်..ဆရာတော် ဘုရားတွေတရားဟောသွားရင်လည်း အကြောင်းအကျိုး နဲ့ သဘော သဘာဝ လို့သာ ဟောပြောသွားကြတာပါ.. #ဟောစဥ်မှာကိုကငါမပါဘာဘူး… တရား အားထုတ် တာ ကြာလာ တဲ့ အခါမှာ…ဘာ မြင်မြင် ဘာကြားကြား အရာအားလုံး က သဘော သဘာဝ တွေ ပဲ ဆိုတာ ကို သိသွား တာကို ပဲ..#တရားရဲ့ သဘော သဘာဝကို သိရှိသွားခြင်း လို့ခေါ်တာပါ.. တ နည်း … တရား.. လို့ခေါ်တယ် ပေါ့.. #ဒီထက်ပြည့်စုံ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သိချင်ရင်တော့ တရား တွေနာပါ… #ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြည့်ပါ..။
သဘော သာတွေ့သွား လို့ကတော့ လက်ခမောင်း ခပ်လိုက်ပါတော့… အတော်ကျေနပ်စရာ ကို ကောင်းလှ တာပါ..မြတ်စွာ ဘုရား ရဲ့ တရားတွေက #သေပြီးမှ ကောင်း စားမယ့် တရား တွေ ကို ဟောခဲ့ တာ မဟုတ် ပါဘူး..မသေခင် ဘဝမှာ ပင် အေးငြိမ်းချမ်း သာခြင်းတွေ ပြည့်နက် ကြွယ်ဝ စေအောင် ဟောပြော ပေးခဲ့တဲ့ တရား တွေ ကြီးပါပဲ…. #လိုက်နာကျင့် သုံးသူ သာအရ သာကို ခံ စားရတာပါ…ကိလေသာကို ၄ ပုံ ပုံကြည့် မယ် ဆိုကြ ပါစို့ ကိလေသာကို ၄ ပုံ ၁ ပုံ ၂၅%လောက် လျော့ သွားအောင် တရား နှလုံးသွင်း မိပြီဆို ရင်ပဲ..အတော် နေလို့ ကောင်းလှ ပါပြီ…ထိုမှတဆင့် တဖြေးဖြေး ကျင့်သွားမယ်ဆို ၁၀၀% ကိလေသာကုန် တဲ့အထိ ရောက်သွား နိုင်တာပေါ့..အပေါ် ကိုရောက်အောင် တက်ဖို့..ကပထမဆုံး ခြေလှမ်း ကနေပဲ စရတာပါပဲ.. #ဒါမို့ ခြေလှမ်း စရုံလေး ပဲရှိသေတာအပေါ်ဆုံးမရောက်သေးလို့ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ဦး..လျှောက်မှမလျှောက်ရသေးတာ..တဆင့်ချင်းလျှောက်သွားရင် ရောက်ပါတယ်………. ……
သူမ ဒီတခါ ဆက်တဲ့ ဖုန်းဟာ စာရေးသူ၏ ရင်ကို အေးမြ စေခဲ့ပါ တယ်…သူမ…. အားရ ဝမ်းသာ အသံ စာစာလေးနဲ့…Hello .. ညီမလေး… ပြောပါရှင့်…ဒီနေ့ ဘာထူးတုန်း…. လို့..အမြဲ မေးလေ့ရှိ တဲ့ စကားလေး မဆုံးခင်မှာပဲ….အေး… မကြီးရယ်…. ထူးတယ်.. ထူးတယ်… အဲ့ဒါ ပြောချင် လွန်း လို့ကို အဓိဌာန် တွေ ခဏ ထား ပြီး ဆက် လိုက် တာ ပါ…ဒီ လို မ ကြီး ရေ.. မ နေ့ ည က ညီ မ ရဲ့ business partner ကလေ အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်တိုဒေါသ တွေထွက်ပြီး ညီမဆီကို ဆဲ.. တဲ့ စာတွေ ပို့ထားတာ..သူဖုန်း ခေါ်တဲ့ အချိန်က ညီမက တရား ထိုင်နေတာမို့… တရားဖြုတ် ပြီးမှ ဖုန်းကို လဲ ဖွ င့်လိုက်ရော…အမလေး အမရေ… စာတွေမှ အများကြီး.. မကြီးရယ်… သူစိတ် တွေတိုပြီး ပို့ထား တာပေါ့…..ဒါနဲ့… ညီမ လေ မကြီး ပြောသလို… သတိကို ချက် ခြင်းကပ် လိုက် တယ်…ပြီးတော့… စဥ်းစား လိုက် တယ်… အော်… အေး.. သူ ဒေါသ ထွက်မှာ ပေါ့လေ… ငါကလဲ ငါပဲလေ… ဆိုပြီး.. စိတ်ကို အေးနေအောင် သူ့ကို အပြစ်မမြင်ပဲ ကိုယ်ချင်းစာပေးတဲ့ စိတ်လေး နဲ့ ဆင်ခြင်လိုက်ပြီး…အေးလေ.. ခုတော့ ညည့်နက် နေပြီ မနက်ကျမှ ငါ… သူ့ကို ဆက်သွယ် ပါမယ် လေ.. ဆိုပြီး…ခုမနက်ကျမှ… သူ့ကို.. သူပို့ထားတဲ့ စာတွေကို ss ရိုက်ပြီး ပြန်ပို့ ပေးလိုက်ပြီး…ဟဲ့ jack.. နင် ငါ့ ဆီ ဘာတွေ ပို့ထား တာလဲ… ဟဲ့…လို့.. လည်း မေး လိုက်ရော… မကြီးရယ်… သူက လေ… ချက် ခြင်း ဖုန်းခေါ်ပြီး… ဟယ်.. suasan.. ငါ.. နင့် ကို အဲ့လို တွေ ပို့ခဲ့ တာလား ညက… ဟယ်… ငါ… တောင်းပန် ပါတယ် ဟယ်… အစ ချီပြီး… မကြီး ရယ်… ညီမလေး ကိုလေ… တခါ မှ မပြောဖူး မသုံး နှုန်းဖူးတဲ့ စကားတွေနဲ့ တောင်ပန် လိုက်တာ မကြီး ရယ်…ညီမလေ… အတော် အံ့ သြသွားရတယ် သိလား…ဟိုတုန်းကဆို… ဘယ်ရပါ့မလဲ… သူဆဲ ကိုယ်ဆဲ… အပြန်အလှန် ပေါ့… မကြီးရယ်…အေး… အဲ့ဒါ… အရမ်းထူးဆန်းလွန်းလို့… မကြီးကို ဖုန်းဆက်တာပါ….။
(သူမ အလုပ်သည် နိုင်ငံခြားနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ရ သောအလုပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် foreigner များနှင့် အဆက်အဆံများ ပြုလုပ်ရပေသည်)သူမနှင့်ရန်ဖြစ်သူသည် foreigner တယောက်ဖြစ် ပြီး သူမနှင့် လက်တွဲဖော် business partner တယောက်ပါ.ဤသည်က သူမ၏ ဇာတ်လမ်း အ ကျဥ်း…စာရေးသူကို အဲ့လို အားရဝမ်းသာ ပြောပြနေသော သူမ စကား အပြီးမှာတော့..စာရေးသူ တရား စဟောလေပြီ အေး… ညီမလေး…အဲ့ဒါ… တရားနှလုံး ကိန်းသွားတယ် ခေါ်တယ်…သူ့ကို အပြစ် မမြင် ပဲ postive အမြင် ဖြစ်အောင် တွေးပေး လိုက်နိုင် တာဟာ…… မေတ္တာ ဝင်သွား လို့ တွေးပေး နိုင်တာပါ…ဒီတော့…တရား ဆိုတာ… ကျင့်မှ ရ တယ် ဆိုတာ.. အဲ့ဒါကို ပြော တာပေါ့… အဲ့ဒီ အချိန် မေတ္တာ မလာခဲ့ရင် ဒေါသလာ မှာလေ…ဒေါသ ဆိုတာ… ကိလေသာ.. ကိလေသာ ဆို တာ… အမှောင်ဓာတ်..ကိလေသာဆိုတာ… အပူ… *မီး*.. လေသူ… လာရင်… အလင်းက ပျောက် သွားမှာ…သဘာဝတရားကြီးက.. အမှောင်ရောက်လာရင် အလင်းကပျောက်သွားရတာပဲ…အဲ့ လို ပဲ… အလင်းရောက် လာရင်လဲ..အမှောင်က ပျောက်သွား ရစမြဲ…တခုရှိ နေရင် တခုက ဖြစ်ခွင့် ရှိ ခွင့်မ ရတော့ ဘူး..ဒါမို့… အခု ညီမလေး ဖြစ် စဥ်ကို ပြန်သုံး သပ်ကြည့်ရင်… သူစာပို့ တာမြင်တာ ပဲလေ….ပို့ တဲ့စာက ဆဲတဲ့စာတွေလေ…မြင်လိုက် တာနဲ့ သူက ညည်းကို ဆဲနေ တယ် ဆိုတာ ပုံမ ပေါ်လာဖူးလား?…သေချာ စဥ်းစားနော်…ဒီနေ ရာလေး မှာ…အေး… ညည်းသာ ခုဏပြောသလို… အတွေး မဝင်ပဲ… ငါ့ အပြစ်မရှိပဲ ဆဲရမလား… ဘာညာ ဆိုပြီး…အဲ့လို ရောတွေးလိုက် လို့ မရဘူး လား…ရတယ်နော်…အေး… သို့သော်…. သတိက ဦးသွားတော့… အပူဖြစ် အောင်မတွေး တော့ ပဲ …အေး…အောင်တွေး ပေးလိုက်တာနော်..အဲ့ဒီ အတွေးက ဘယ်မှာ သတ္တိ ကိန်းသလဲ ဆိုတော့ နှ လုံးအိမ်မှာ ကိန်းသွားတာ..နှလုံးသွေးက ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးကို ပြန့်နေတာနော်…။
ဆံပင် ခြေသည်း၊ လက်သည်း က လွဲရင် သွေး မရောက်တဲ့ နေရာ ဆိုတာ မရှိ ဖူးလေ…ဒါမို့… တ ကိုယ်လုံး မှာ အအေးသတ္တိ ကိန်းမသွား ဖူးလား…အဲ့ဒါ ကိုပဲ တနည်း အလင်းဓာတ် ဖြစ်မသွားဘူး လား…အဲ့ဒါကိုပဲ… တနည်း ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ် လို့ခေါ်တာ..ဉာဏ်လာမှ အလင်းပေါ်တာ…အဲ့လို အလင်း ပေါ်လာပြီဆို မှတော့…သူနဲ့ တူရာတူရာ ဆွဲငင်ပြီပေါ့ကွယ်…ဘယ်သူက ဆွဲငင်တာလဲ ဆို တော့ ခုဏ နှလုံး သွေးမှာ ကိန်းသွားတဲ့ သတ္တိက ဆွဲငင်တာပေါ့…အဲ့တော့ သေချာလေး အဲ့ နေရာ မှာ ပြန် စဥ်းစား ကြည့်နော်…သတ္တိ ကိန်းလို့ အဲ့ ဒီ အကြောင်း သတ္တိ နဲ့ တူတဲ့ အရာက တန်ပြန် အ ကျိုးရ လာတာ လေ…အဲ့မှာ… ငါ… ပါသလား… ဖန်ဆင်းရှင် အကောင် အထည် ပါ သလား .. အေး…. အဲ့ဒလို သိသွားတာကို…တရား သိသွား တာလို့ခေါ်တာပဲ… ညီမလေး…အဲ့တော့… ဒါတွေ က ဘယ်သူလုပ်တာလဲ.. ပြုလုပ် သူမရှိ..စိတ်မှာ​ဖြစ် တဲ့… မိမိရဲ့ အတွေးတွေကို မိမိက ကြိုက်သ လို တွေး ယူလို့ ရနေ တာလေ…ပူအောင် တွေးလို့ လည်းရ တယ်…အေးအောင်… တွေးလို့ လည်း ရတယ်….အတွေး က ရပ်​ပြစ် လို့မှ မရတာ….ဘာတွေး နေ သလဲ ဆိုတာ ကို သိဖို့ပဲ လိုတာ….ပူ အောင် တွေးရင် အပူလာမယ်…။
အကုသိုလ် ဓာတ်တွေ ကိန်းမယ်…အကုသိုလ် အကျိုး တွေပေးမယ်…အေးအောင် တွေးရင်.အေး လာမယ်… ကုသိုလ် ဓာတ်တွေ ကိန်းမယ် ကုသိုလ် အကျိုး တွေ ရမယ်…ဒီတော့.. အ တွေးက အ ကြောင်း ဖြစ်နေ တာနော်…အကျိုးတရားမှာ ရလာတာ တွေဟာ မိမိက အကြောင်းတရားတွေမှာ ဘာတွေ ပြုခဲ့တွေးခဲ့ သလဲပေါ်မှာ မူမတည် နေဖူးလား…ဒါကိုပဲ… သေသေချာချာ လေး..သဘော ပေါက်အောင် စဥ်းစား နော်…ညီမလေး…အေး… အဲ့တော့.. ခုဏ ညည်းတွေး လိုက်တာ အပူလား အအေးလား..အေးအောင်တွေးပေးလိုက်တာလေ…. အဲ့တော့… သူနဲ့ တူတဲ့အရာ တန်ပြန်အကျိုး ပေး တော့..တာပေါ့ ဟော့… အခု… ညည်းကို… I love you dear… တွေ ပါတွေ ဖြစ်လာ ရတာ ပေါ့… ..ကွယ့် ဒီလို အာရုံ ဒွါရ ဆုံလို့ တိုက်တိုင်း တိုက်တိုင်း မှာ အအေး ဓာတ် တနည်း အလင်း ဓာတ် ဖြစ်အောင် တွေး ပေး နိုင်ပြီ ဆိုရင်….ဒါဟာ… တရား တက်တာ ပေါ့ ညီမ လေးရဲ့…အဲ့ ဒလို ခဏခဏ နှလုံး သွင်းရ မှာ နော်…အဲ့ဒါ… ကို ယခုပစ္စုပ္ပန် မှာ တိုက်တိုင်း တိုက်တိုင်း သတိလေး နဲ့ ကြည့်ပေးပြီး အတွေးတွေကို ပြောင်း​ပေး နေတာဟာ ခဏ နိဗ္ဗာန် လေးတွေ ပေါ်ပေါ်နေတာ ပေါ့ ကွယ်..ကဲ… ဒီတော့ သေချာ စဥ်းစား နော်…အဲ့ဒီ နိဗ္ဗာန် ပေါ်ဖို့ မျက်စိ မှိတ် ပြီး ရှူးရှဲ ရှူးရှဲ နဲ့ ငြိမ် ငြိမ်လေး ထိုင်လိုက် ရလား ….ရိပ်သာကိုရော သွားလိုက် ရလား… အေး… နော်… အကြောင်း အရာ တခု ဖြစ်ပေါ် လာပြီဆို…..အဲ့ဒလို သေချာလေး စဥ်းစား ပေးရ တယ်လေ….ဒါမှ ဉာဏ်ပေါ် မှာလေ နော်…အဲ့တော့… ဒီ ဖြစ် စဥ်လေးကို နမူနာယူပြီး… တရားအားထုတ်နေလို့ မရ ဘူးလား… အပြန်​ပြန် အလှန် လှန် တွေးကြည့်လေ…နော် သဘောပေါက်သွားတဲ့… အထိ တွေးကြည့်နော်… ဒါမို့..ဘယ်ဆရာတော် ဟောဟော…။
ဒါတွေ ကြီးပဲ… ပါနေတာမဟုတ်ဖူးလား…သို့သော် ကိုယ်က ကိလေသာတွေ ထူနေတော့..တရား သာနာ တယ် စိတ်က တခြား ရောက် နေတော့…သဘော မပေါက် တော့ဘူး…ခု… အဲ့ဒီ လိုမျိုး အ အေးဓာတ် သတ္တိ လေးတွေ ကိန်းအောင် သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်ပြီး အတွေးတွေကို ပြောင်း ပေးနေ ရင်း ဘဝတွေက ပြောင်းသွား မှာလေ…ဒါကြောင့်…တွေးနေရင်း ဘဝ ပြောင်းနေတယ် ဆိုတာ ဒါ ကိုပြောတာ…ဒါမို့ ရိပ်သာမှာသင်ပေးလိုက်တဲ့… တရားနည်းစနစ်တွေကို ပြန်လေ့လာ ကြည့်နော် ညီမလေး…ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိ လိုက်သလဲ ဆိုတာ…မိမိက ဒါတွေကို အသုံးချပြီး လက်တွေ့ ကျင့်ဖို့ ကို သတိ မရှိကြတာ…သိတော့ သိတယ် မကျင့်ဘူး ဆိုတာက…တကယ် မသိ သေးလို့ ကို မကျင့်တာပါ…ဘယ်လို မသိတာ လဲ ဆိုတော့…ကိလေသာကို ပူတယ် လို့ မသိသေးတာ.. ကိလေ သာကို မီး လို့ မသိသေးတာ…ကိလေသာ ကို အမှောင်လို့ မသိတာပေါ့…ဒါတွေ ကို သိသွား တဲ့သူ က မကျင့်ပဲ ဘယ်နေ နိုင်တော့မှာလဲ သိတာနဲ့ ကျင့်ပြီးသား ဖြစ်နေပြီလေ ပူတာကိုး… ဘယ်ကြာ ကြာလက်ခံထားပါ့မလဲ…ကြာကြာလက်ခံမထားတာကိုပဲ.. ဖြစ်ကြော တိုတယ် လို့ ပြောတာပေါ့ ကွယ်…ဖြစ်မှန်း သိတာနဲ့ အအေး နဲ့ အစားထိုး ပြီးနေပြီ…လေ..အဲ့တော့… အဲ့ဒါကို မသိ ကြတော့ ကာ…ဆင်းရဲတာပေါ့…ခုဆို ညီမလေး ရဲ့ အခု ဖြစ်ရပ် ကို ကြည့်နော်..သူ့ဆီကနေ ပြန်လာတဲ့ တန် ပြန် တုန့်ပြန် မှုကြောင့် ညည်းဝမ်း မသာရပေ ဖူးလား….အေး… အဲ့ဒါ… အပိုင်း အခြား မရှိအောင် ထားနိုင်တဲ့ မေတ္တာမျိုး ကြီးနဲ့ လူတိုင်း အပေါ် ထားကြည့် ပါလား…စီးပွား ဥစ္စာတွေဒလဟော ပေါ လါတာပေါ့ကွယ်..။
မေတ္တာ ဆွဲအား ရှိမှ စီးပွား ဥစ္စာတွေ က တိုးပွားတာ…ဒါကိုပဲ… တချို့ ဆရာတော် ဘုရားကြီး များ က ပါဠိမပါ မြန်မာလို သက်သက်ကြီးပဲ…မေတ္တာရဲ့ ဆွဲအား အကြောင်းတွေကို ဟောကြ တာပေါ့ ကွယ်…မတျ တောဟာ အသကပြဲ…သူမ ပါရင် …ထစ်ငေါ့ နေမှာ ဘဝ လမ်းခရီးက… အလောင်း တော်ကြီးက ပါရမီ တွေဖြည့်ခဲ့စဥ် ဘဝတွေက မေတ္တာကိုပဲ လက်ကိုင်ကျင့်သုံးခဲ့တာ လေ…အေး … အဲ့တော့… ကိလေသာကို တဆင့်ချင်း သတ်မှ ရမှာလေနော်…ကိလေသာ အကြမ်းစား တွေကို သီလနဲ့သတ်ရတယ် အလတ်စားတွေကို သမာဓိနဲ့သတ်ရ တယ်အနုစားကျတော့ ဝိပဿဉာဏ် နဲ့ သတ်မှ ရတယ်…မိမိက အခု လို ကိလေသာ တွေ ကို တဆင့်ချင်း ဖြေးဖြေးချ င်း သတ်သတ်ပေး သွားမှ သာ အပေါ်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်မှာလေ…စစချင်းထဲက နေ.. ခုန်တက်ချင်လို့ ဘယ်ရ ပါ့မ လဲ…တဆင့်ချင်း အဲ့လို လေးသွားရတာကို ခု သဘောပေါက်ပြီ လား ညီမလေး…အင်း… သဘော ပေါက်လာပါပြီ မကြီးရယ်…ခု.. မကြီး ပြောတဲ့အတိုင်း… ဗုဒ္ဓနုဿတိကို ထုံနေအောင် ပွားနေတာ မနေ့က လေ အိပ်မက်ထဲ ထိတောင် စွဲလာ ပါပြီ…အေး… အေး.. အဲ့ဒါ ကလည်း… ဆွဲအား ပဲကွဲ့… ဘုရား ဂုဏ်တွေ ပွားနေ တဲ့ အခါမှာ တခြား ကိလေသာ တွေ ဖြစ်ခွင့် ရှိသေး ရဲ့လား..အေး… မရှိ ဘူးနော်… အဲ့ဒီ အချိန် အမှောင်ဖြစ်နေလား အလင်းဖြစ်နေလား…အလင်းဖြစ်နေတာနော်…။
ဒါမို့… ကုသိုလ် အလင်း ဓာတ်ကြီးက ဆွဲငင်ရင် သူနဲ့တူရာ တွေပဲ အကျိုး ပေးပြီပေါ့… သွေးသား ထဲမှာ ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တွေ နဲ့ သတ္တိ ကိန်းအောင် ထုံမွှမ်းထား မှတော့…. ဒီလူ မချမ်းသာပဲ ဘယ်နေ နိုင်တော့ မှာလဲ…ဒါမို့… ဘယ်လောက် အကျိုး များလိုက် သလဲ..ဂုဏ်တော် လေးပွား နေတာ.. အ မှောင်မလာ အလင်းရ လို့ ခဏ နိဗ္ဗာန်လေး တွေကပေါ် နေလို့လည်း ချမ်းသာတယ်..ဟော… သူ့ရဲ့ သတ္တိဆွဲအား က အကျိုးပေးပြန်တော့လည်း ကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲ ရတယ်..ကယ်… ဒလောက် ကောင်းတာ ရှိပါ့မလားလို့…မိမိက ဒီအဆင့် လောက်လေးပဲ ရသေးတာ ဒီအဆင့်ကို အရင်ဆုံးထုံ နေအောင် ကျင့်ရမယ်လေ…ပြီးတော့မှ တဆင့်ချင်း တက်တက်သွားရမှာပေါ့… ဒီအဆင့်လောက် တောင် ကျင့်ဖို့ အတော် ခက်နေ ကြတာ ပါ….ဘာလို့လဲ ဆိုတော့.. သတိ မရှိကြ ဘူးလေ… တယ် လည်းမေ့တက်ကြတာကိုး…အေးကွယ်..နောက်နေ့ ဆက်ပြောပြပေးမယ် နော်…ခုပဲကြည့် စမ်းပါ ဦး…ကိုဗစ်ကြောင့် လူတွေ ပူလောင်သောကတွေဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ.. ညီမလေးက အိမ်ထဲမှာ တရား လေးအားထုတ်လိုက် ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလိုက် ရှိနေတဲ့ အလုပ် လေးတွေ ph လေးနဲ့ လုပ် လိုက် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်သလဲ…သူများတွေလည်း ဒီ ကပ်ရောဂါ ကြီး ကို အားလုံးကြုံ နေကြရတာပဲနော်…သို့သော်။
တရား နှလုံး သွင်း မှန် တဲ့သူက အေးဆေး ဖြတ် ကျော် နိုင်ပြီး တရား နှလုံး မသွင်း နိုင်တဲ့ သူများ ကျတော့ ညည်းညူအော်ဟစ် ဒေါသ တွေနဲ့ ဖြတ်ကျော် နေရ တာ လေကွယ်…ဘာကွာ လို့တုန်း.. ကြုံနေရတဲ့ လောကဓံ တူတူပဲ လေ…အေး… တရား နှလုံးသွ င်းမှန်ခြင်းမမှန်ခြင်းပဲ ကွာသွား တာ လေကွယ်..ဒါသ ည် ပင် မြတ်စွာ ဘုရား ရှင်ကြီး ကို ကျေးဇူး မတင်သင့်ဖူးလား…ဘုရားသာ အပူ ထဲမှာ အေးအောင်နေ နည်းကိုသာ မဟောကြားပေးခဲ့ရင် ဘယ်လို သိမှာတုန်းကွယ် သိပ်ကျေးဇူး တင်သင့်တယ်နော်…အေးအေး… နောက်နေ့ဆက်မယ်ကွယ်…….
စာရေး သူလည်း လက်ညောင်း သွားလို့..နောက်နေ့ မှ ဆက်ရေး ပေးမယ် နော်…အဲ့ ညီမလေး ကို တရားတွေ ပြန်ဟောပေးရတာ…စာရေးသူအဖို့ ကုန်ကြမ်းတွေကိုရရော ပဲ သူမ တရား နှလုံး သွင်းမိ သွားပြီ ဆိုတာကို သိလိုက် ရလို့ လွန်စွာ ဝမ်းသာ ၍ ရေးမိပါ၏..I love you all ယောဂီ အားလုံးတရားတွေ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်